Umnyuziyamu omkhulu kunayo yonke wase-Afrika wobuciko besimanje uvulwe ngo-2017 - Afrikhepri Fondation
tuesday, j 27 2021, XNUMX
Imnyuziyamu enkulu kunazo zonke yase-Afrika yobuciko besikhathi samanje ivulwe ngo-2017
Limnyuziyamu enkulu kunazo zonke yase-Afrika yobuciko besimanje evulwe ngo-Okthoba 2017 eKapa (eNingizimu Afrika). Indawo yezivakashi i-Zeitz MOCAA yamiswa eduze nendawo lapho kwakukhona khona isiqhingi sasejele iRobben Island lapho owayenguMongameli waseNingizimu Afrika uNelson Mandela afakwa khona ushevu.
Imnyuziyamu entsha ihlanganisa ubuciko besimanje obuvela e-Afrika obusakazeke emazwenikazi ase-Europe naseMelika I-Zeitz MOCAA inendawo engama-6 m000 futhi inezikhungo zemfundo zezingane kanye nabagcini abancane bama-Museum. Ibuye ifakwe izitolo, izitolo ezidayisa izincwadi nezindawo zokudlela. Isiza silinganiselwa ku-2 million rand (500 million euro) ngokusho RFI.
Ukwakhiwa kwesakhiwo esiyisishiyagalolunye kunikezwa umdwebi waseBrithani uThomas Heatherwick, umbhali we-2012 London Olympic bowl.
"Imakethe iyadlondlobala, abadwebi abavela e-Afrika babamba iqhaza kuyo yonke iminyaka emibili, abanikazi abakhulu begalari nabaqoqi bathakazelela abaculi base-Afrika", uthi uMark Coetzee, umqondisi wezokuphatha kanye nomgcini omkhulu weZemam Museum of Contemporary Art Zeitz (Zeitz MOCAA).
UMark Coetzee ujabule ngalolu hlelo lokuzikhandla. Kuye, uZeitz MOCAA akakaze abe khona kuleli zwekazi lase-Afrika. "Ngicabanga ukuthi ungasho ukuthi uma isiqediwe, izoba yisigcinamagugu esikhulu kunazo zonke e-Afrika nasemhlabeni wonke okugcizelela ukwenziwa kobuciko besimanje base-Afrika", uqinisekisa.